DAAWO:-Wadooyinka ugu muhiimsam Muqdisho oo xiran - Radio Risaala: Somali News Online
Home FAALLOOYINKA DAAWO:-Wadooyinka ugu muhiimsam Muqdisho oo xiran
48-kii Saacadood ee la soo dhaafay waxaa Magaalada muqdisho ka da’ayay roob saameyn ballaaran ku yeeshay dadka danyarta ah iyo isku socodka dadka iyo Gaadiidka.
Roobka ayaa waxaa uu Biyo dhigay wadooyin farabadan oo muhiim ah oo ku yaalla Muqdisho, kuwaas oo aan wax Gaadiid ah mareyn maadaama Biyo farabadan ay yaallaan.
Wadooyinka muhiim ah ee Biyaha roobka ku xirmay ayaa waxaa kamid ah wadada Shaleemo Afrika ee kala qeybisa Xamarweyne & Xamar Jajab, Wadada Ceelqalow ee Xaafada Buulo Xuubeey, wadada ka baxda Isgoyska Seybiyano ee aada Ex-koontorool Afgooye, wadada u dhaxeysa Isgoysyada Maana Booliyo & Afara Darjiino, wadada Xaafada Siisii, halka gebi ahaan wadada 30-ka ay ku dhowdahay inay gebi ahaan xiranto, kaddib markii Biyaha Roobka ay buux dhaafiyeen.
Qaar kamid ah Shacabka Magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyay maamulka Gobolka Banaadir in aysan waajibkooda gudan, isla markaana aysan dhisin wadooyinka muhiimka ah ee Magaalada Muqdisho.
Halkan Ka Daawo Warbixin ku saabsan wadooyinka qaar ee xiran.
Previous articleDhageyso:- Waare oo sheegay in la afduubtay doorashada Hir-Shabeelle
Next articleIlhaan Cumar oo markale dib loo doortay